Tanzania Tour Operators Zvino Havana Kupesana naMinister Over Funds
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Tanzania Tour Operators Zvino Havana Kupesana naMinister Over Funds
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Kuratidzira kuTanzania Tourism Budget Cut
Mari inosvika mamirioni makumi mana emadhora yakachekwa nehurumende yeTanzania kudzikamisa denda reCCIDID-40 paindasitiri yekufambisa uye yekushanya yapatsanura zvakanyanya vane chekuita nezvenzvimbo dzinokosha dzekudyara.
Mari iyi chikamu chechikwereti chemamiriyoni mazana mashanu nemakumi matanhatu nenomwe emadhora chakabvumidzwa neInternational Monetary Fund (IMF).
Chikwereti ichi chakagadzirirwa kutsigira zviremera zveTanzania zvine simba kuedza kupindura denda iri nekugadzirisa nekukurumidza hutano, rubatsiro, uye hupfumi.
Mapurojekiti anosanganisira kugadziridza zvivakwa, kuisirwa masisitimu ekuchengetedza, uye kutenga nharembozha yeCOVID test kits.
Kunyange hazvo bazi rezvezviwanikwa nekushanya rakapawo chikamu cheshumba chikamu chemadhora 39.2 miriyoni chakaiswa parutivi nehurumende yehurumende kuti itsigire indasitiri yezvekushanya inosvika mabhiriyoni emadhora kugadzirisa zvinhu zvakaoma uye kutenga zvivakwa zvakapfava, vatambi vakazvimiririra vakanganisa kufamba, vachiti hazvizobudise zvakatarisirwa.
Manheru maviri apfuura, gurukota rezvezviwanikwa nekushanyirwa kwenyika, Dr. Damas Ndumbaro, vakaburitsa mashoko vachiburitsa mapurojekiti ane chitsama achaiswa mari iyi neshuviro yekumutsiridza indasitiri yezvekushanyirwa kwenyika. COVID-19 dambudziko.
Dr. Ndumbaro vanoti zvirongwa zvichaitwa zvinosanganisira kuvandudzwa kwezvivakwa, kuiswa kwemasecurity systems, kutenga nharembozha dzekuongorora hutachiona hweCOVID-19 pakati pevashanyi.
Nekutaura chokwadi, Minister vakati chikamu chikuru chemari chichashandiswa kugadzirisa migwagwa ine 4,881 km inotungamira uye mukati memapaki makuru eSerengeti, Katavi, Mkomazi, Tarangire, Nyerere, Kilimanjaro, Saadani, Gombe pamwe chete. Ngorongoro kuchengetedza nzvimbo.
Pasuru iyi ichaendawo kutsigira sangano rehurumende reTanzania Forests Services Agency (TFSA) neTanzania Wildlife Management Authority (TAWA) muhurongwa hwavo hwekuchengetedza masango nekuchengetedza mhuka.
Ministry inorongawo kuisa mari yakawanda mukuwaniswa kwezvifambiso zvine chekuita nekushanya, chakakosha pakati pazvo chingave chikepe chegirazi-pazasi chekutarisira rwendo rweIndian Ocean kuti chiendeswe kuKilwa Island kupa vashanyi maonero asina mutsetse. mhuka dzepasi pemvura nemhuka kubva mukati mechikepe.
“Zvirongwa izvi zvicharerutsa kuwanikwa kwenzvimbo dzakasiyana-siyana dzinokwezva vashanyi, kuburitswa kwezvinhu zvitsva zvekushanyirwa kwenyika kuitira kushanya kwakasiyana-siyana kuti vatore misika yevashanyi vari kusimukira, uye kuzomutsiridza indasitiri yezvekushanyirwa kwenyika,” Dr. Ndumbaro vanodaro mukutaura kwavo.
Zvakadaro, vane chekuita nekushanyirwa kwenyika havasi kuwirirana nekushandiswa kwemari yekutsigira indasitiri kudzoreredza zvivakwa zvakaomarara uye zvakapfava, vachiti hurumende inofanira kuzvishandisa senzira yekukurudzira kuti ibudirire nekukurumidza uye kukurumidza kudzoka pakudyara.
The Tanzania Association yeVashanyi Vanoshanda (TATO) pamwe nepamusoro pe80 muzana yemugove wemusika webhizimusi rekushanya muTanzania inoti mari iyi inofanirwa kushandiswa kutsigira kudzoreredzwa kweindasitiri kunyanya kuburikidza nebazi rakazvimirira uye nenzira yakakodzera, izvo zvinozosimudzira mamwe masekete mukukosha uye kugovera cheni.
Saizvozvo, izvi zvichadzosa zviuru zvemabasa akarasika uye kuunza mari kuhupfumi, TATO yakati mukutaura.
“Mari iyi inofanirwa kupihwa kune vemabhizimusi akazvimirira kuti vagadzirise zvikwereti zvine mubereko wakaderera kwenguva refu kuitira kuti vadzorerwe kwete kutsvagirwa mari,” chinodaro chirevo cheTATO chakasainwa nasachigaro wesangano iri, VaWillbard Chambulo.
TATO yakurudzira kuti chikamu chemari chideredze VAT pakushanya, mari zhinji kusangano renyika rinoshambadzira, Tanzania Tourists Board (TTB), kuti ikwanise kusimudzira kwainoenda nemazvo kuitira kuti indasitiri yakakosha irambe ichienderera mberi. kukwikwidzana kwekucheka pakati pevezera.
"Takapembera nehurongwa hwehurumende yedu hwakaziviswa kuindasitiri yekushanya, tichifunga kuti yaive nguva yepfuti mumaoko eindastiri iri kutadza, sezvo ichakurumidza kupora, asi zvinosuwisa kuti izvi hazvisi kuzoitika" inoverenga TATO chirevo.
TATO yakurudzira kuti mari iyi isanganise mari yekushanda kana zvikwereti zvine mubereko wakaderera mumaoko evashanyi vakaoma-bata uye vamwe vane chekuita kuti vatangezve bhizinesi sezvo mabhanga asingavape zvikwereti zveoverdraft.
"Kupa mubereko wakaderera uye mari yekushanda kwenguva refu kana zvikwereti zvevatambi vekushanya zvinovabatsira kushandira zvisungo zviripo uye kuisa mari munzvimbo dzakakosha kumutsiridza indasitiri yekushanya nekukurumidza kupfuura zvingaitwa nezvivako," mukuru weTATO akapokana.
Sachigaro weTATO, VaChambulo, vakataura mashoko emutungamiri wenyika, VaSamia Suluhu Hassan, vachiti bazi rezvekushanyirwa kwenyika vachagara pamwe chete vobvumirana pazvichakosheswa kuisa mari kuti indasitiri iyi imukire.
“Chandinorangarira, Amai Samia Suluhu Hassan vakatiudza masangano akazvimirira oga tiri kuNew York, uye ini ndanga ndiripo kuti ndigare nebazi redu tichikurukura nezvekushandiswa kwemari iyi, asi chakatishamisa ndechekuti takangoverenga mumapepanhau kuti mari [yakagoverwa],” vakadaro VaChambulo.
Chirwere checonavirus chisati chatanga, data reBank of Tanzania (BoT) rinoratidza kuti kushanya muna 2019 kwakakwezva vashanyi miriyoni imwe chete nemazana mashanu vakawana hupfumi hwemadhora mabhiriyoni maviri nemazana matanhatu kekutanga, vachiva ivo vanotungamira mari dzekunze.
Muna 2020, mushumo weWorld Bank wazvino uno unoratidza, kushanya kwakadonha nezvikamu makumi manomwe nezviviri muzana, nekuda kwemhedzisiro yeCCIDID-72 denda, zvichikonzera kuvharwa kwemabhizinesi makuru uye kukonzera kudzingwa kusati kwamboitika.
“Patiri kutaura pari zvino, zviuru nezviuru zvevashandi zvichiri kumusha, sezvo tiri kutatarika kumutsiridza indasitiri nemawoko asina chinhu. Tine zvikwereti zvebhanga uye zvikwereti zviri kuwanda. Sokunge izvo hazvina kukwana, hapana bhanga rinofarira kutipa chikwereti kwatiri zvakare; isu tinosara tichifa,” akadaro.
“SaSachigaro weTATO, ndinoda kutenda Madam President Hassan nekuwana chikwereti uye nekupa $39.2 miriyoni yekushanya kuti imutsiridze indasitiri. Isu tinopa zano kuti Ministry ipe zvikwereti kumabhizinesi akavimbika kuti akwanise kudzoka kwataive tisati tave COVID-19; dzosera vanhu vedu kubasa; chengetedza maroja, misasa yetende, motokari; uye tinotsigira zvirongwa zvekurwisa kuvhima zvisiri pamutemo, isu tichipora zvishoma nezvishoma,” vakatsanangura.
“Tichadzokera kubhizimusi zvakare, uye chikwereti cheIMF ichi chinofanirwa kubhadharwa nesu kana nevana vedu nevazukuru. [Chikwereti] chinofanira kuiswa mubhizimisi kuti chiwane pundutso, kuti pave nemabasa, uye kubhadhara mitero,” vakadaro VaChambulo.
Sezvo chikamu chekushanyirwa chichichinja zvishoma nezvishoma mukuita kudzoreredza pamwe nepasirese, Chirevo cheWorld Bank chazvino chinokurudzira zviremera kuti zvitarise kusimba kwaro kweramangwana nekugadzirisa matambudziko arikureba anogona kubatsira kuisa Tanzania padanho rekukura uye rinosanganisirwa.
Nzvimbo dzekutarisa dzinosanganisira kuronga kwekuenda uye manejimendi, kusiana kwechigadzirwa nemusika, kunyanya kubatanidza kukosha kwenzvimbo, bhizinesi rakavandudzwa uye mamiriro ekudyara, uye mhando nyowani dzebhizinesi dzekudyara dzinovakirwa pakudyidzana uye nekugovana kukosha kwekusikwa.
Tourism inopa Tanzania mukana wenguva refu yekugadzira mabasa akanaka, kuunza mari yekunze, kupa mari yekutsigira kuchengetedza nekuchengetedza nhaka yechisikigo netsika, uye kuwedzera hwaro hwemutero wekubhadhara mari yekusimudzira uye kuedza-kuderedza hurombo.
Iyo yazvino bhanga reWorld Bank Tanzania Economic Update, Shanduko Yekushanya: Kuenda kune Sustainable, Resilient, uye Inclusive Sector, inosimbisa kushanya sepakati pehupfumi hwenyika, mararamiro, uye kuderedza hurombo, kunyanya kuvakadzi vanoumba makumi manomwe neshanu muzana evashandi vese mukushanya. sub-sector.
Mutambo wapera anoti:
November 13, 2021 pa 18: 00
IMF haina kumbobvira yabatsira nyika ine hurombo. Icho chishandiso chenyika dzakapfuma kudzvinyirira nyika dzine urombo. Senyika ine urombo, Tanzania yave kuenda kunodonha.
Hemp Real Estate Zvikwereti anoti:
November 2, 2021 pa 08: 14
Funga kuronga yako gap gore kuti udzivise mwaka wevashanyi wepamusoro kuitira kuchengetedza mari pekugara, kufamba, uye zviitiko. Mutengi mumwe mukurusa wezvinodhaka zvisiri pamutemo munyika, zvisinei, achiri kuita seUnited. Kunyange zvazvo Japan isati yagadzirira kugamuchira vashanyi vokune dzimwe nyika kudzoka, tarisiro inozotarisira kuwana masheya ane chokuita nerwendo rwanetsa rwenyika .